Sida Loo Ogaado Haddii Qof Ku Xannibay Instagram
Awood u lahaanshaha in liiska dadka madow lagu qoro baraha bulshada ayaa si weyn waxtar u leh, laakiin waxay noqon kartaa niyad jab haddii aad ku jirto dhinaca qaataha oo aadan fahmin sababta ama sida ay u dhacday.
Haddii aad u malaynayso in lagaa xanibay Instagram, Ha ka welwelin : ma tihid qofkii ugu horreeyey ee laga xannibo baraha bulshada waxaana hubaal ah inaadan noqon doonin kii ugu dambeeyay.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu sheegi karo haddii dhab ahaan lagu xanibay iyo in kale., markaa ha ka waaban inaad wax weydiiso !
Tani asal ahaan waa sida aad ku sheegi karto haddii qof kaa horjoogsaday Instagram.:
Ma awoodid ha arkin isticmaalaha markaad raadineyso isaga
Ma awoodid ku arag kuwa raacsan ama kuwa ku raaca
Qoraaladooda ha muuqan
Ma awoodid ma arkaan Sheekooyinkooda Instagram
Xitaa haddii aad farriin u dirto, iyaga ma heli doono maaha
Iyaga arki maayo ma aha dhejimahaaga
Iyaga arki maayo maaha faallooyinkaaga qoraallada kale
Iyaga Xiriirku wuu baaba'ayaa (haddii aad hore farriimo uga heshay)
Sida Loo Ogaado Haddii Qof Ku Xannibay
Mararka qaarkood dadku waxay tirtiraan koontadooda, ama barta Instagram ayaa mamnuucday akoonnada. Markay taasi dhacdo, calaamadaha kore waxay leeyihiin sifooyin la mid ah marka qof ku xannibo.
Tani waa hal dariiqo oo lagu hubiyo, waxayna u shaqaysaa sidatan:
Bilow adiga oo ka raadinaya koontadaada. Haddii aadan arkin, waxaa laga yaabaa inay beddeleen magacooda ; markaa hubso inaad raadsato magacyo kale.
Ensuite, weydii qof haddii aad u isticmaali karto koontadooda si aad u hesho adeegsadaha, ama isticmaal koonto kale haddii aad mid leedahay.
Raadi koontada iyo haddii ay ka muuqato koontada isticmaalaha kale, fursadaha waa lagu xanibay.
Kani maahan sida kaliya ee lagu ogaan karo haddii dhab ahaan lagu xanibay, laakiin waxaan ogaanay in tani tahay habka ugu fudud uguna kalsoonida badan.
Maxaan samayn karaa haddii qof iga hor istaago barta Instagram -ka
Nasiib darro, ma jiraan wax badan oo lagu sameeyo xaaladdan, maxaa yeelay nidaamka waxaa loogu talagalay inuu ilaaliyo dadka isticmaala ee xanniba kuwa kale, waana xaq sidaas. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad u malaynayso in si kadis ah lagu xanibay, iyo in kani yahay qof aad taqaan, la xiriir a madal kale oo warbaahinta bulshada ah waxna ka weydii.
Marmar, waxay noqon kartaa qalad wax walbana waa hagaagsan yihiin, waxay kaa furi karaan dhinacooda. Haddii, si kastaba ha ahaatee, waxay ahayd xannibaad dhab ah, tani waa fursaddaada inaad wax saxdo oo aad ogaato wixii khaldamay. Xusuusnow haddii aad ka xanaajisay ama dhibtay qofkaas, xaq bay u leedahay inay tan samayso waxaana laga yaabaa inaad u qalanto in lagu xannibo.
Maqaal horeSida loola Xiriiro Saameeyayaasha barta Instagram
Maqaalka XigaInstagram ii ogolaan mayso inaan galo : Hagaha dayactirka